About us - XuZhou Xinpaez Amanzi Ukuhlanzwa Equipment Co., Ltd.
Xinpaez: Uchwepheshe ekwelashweni kwamanzi kusukela ngo-2010 China Xinpaez imishini yokuhlanza amanzi Co., Ltd.ngumkhiqizi ovelele ocwaningweni, ukuthuthukiswa, ukukhiqizwa nokuthengiswa kwamakhanda eshawa, amapayipi eshawa, izihlungi zamanzi, izingxenye zokuhlunga amanzi nezesekeli zasekhishini. Yasungulwa ngonyaka we-2010 ngenhlokodolobha ebhalisiwe ye-6 million yuan (RMB). Ngaphansi kokuholwa okubalulekile nguMqondisi wethu, 'Mnu. WenLian Qiao ', sizuze impumelelo enkulu kulesi sizinda. Ubuholi bakhe obunomusa, ulwazi oluningiliziwe kanye nogqozi oluqhubekayo kusenze sakwazi ukuzimisa njengenhlangano ethembekile yale ndawo.
Njengamanje besilokhu sisebenzisa imigqa yokukhiqiza eyi-10. Sinikwe amandla yithimba elikhuthele lochwepheshe.
Inkampani yethu ineqembu elizimele le-QC (Ukulawulwa Kwekhwalithi), bazokwenza ukuhlolwa kwesampuli okujwayelekile nokungajwayelekile ukuqinisekisa ikhwalithi yomugqa wokukhiqiza, kususwe noma ikuphi ukukhathazeka kwamakhasimende. Ochwepheshe bethu basebenzisa ubuchwepheshe bamuva bokonga amanzi nobokuhlunga amanzi kwizimpawu ezinhle zamanzi. Basebenza ngokubambisana ukuze kufezekiswe ngempumelelo izinhloso zenhlangano.
Inethiwekhi yethu yokuthengisa neyensizakalo isakazeka ezweni lonke, amazwe amakhulu okuthekelisa yiJalimane, iSouth Korea, i-Italy, i-India, iRussia, i-Australia, i-Indonesia, njll. Inani eliyinhloko lebhizinisi lithi "Gxila kuzinga kunenani, khiqiza ngenhliziyo". Siyethemba ukuletha usizo olwanelisekile ngomsebenzi wethu onzima. Ungashayela inkampani yethu noma kunini uma uthola izinkinga ngenkathi usebenzisa imikhiqizo yethu. Sizophatha zonke izinkinga zangemva kokuthengisa ukuze weneliseke. Ukuze sikuvumele uthenge ngokukhululeka, uXuzhou Xinpaez uthembisa okulandelayo: ikhwalithi ephezulu, intengo ephansi, ukulethwa okusheshayo, insizakalo ehamba phambili yokuthengisa.
EXinpaez, siye saba uphawu lokuhlanzwa kwamanzi eChina. Eminyakeni edlule, sithole ulwazi oluningi kulesi sizinda. Sithembele kuthimba lochwepheshe abaqinisekisiwe. Akunandaba ukuthi yini oyidingayo, sizokwazi ukukubonisa ikhambi elingcono kakhulu lokuthola amanzi amsulwa.
Sinikela ngemikhiqizo yekhwalithi ephezulu kuphela. Inhloso yethu ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ethu. Sinemishini esezingeni eliphakeme, ubuchwepheshe obuchwepheshe, ifomula yesayensi kanye nokuphathwa kwekhwalithi yokukhiqiza eqinile. Sizokwazi izidingo zakho ngesikhathi, futhi senze zonke izinhlobo zemikhiqizo ngokuya ngezidingo zakho.
Ochwepheshe abaqokwe yithi banolwazi oluningiliziwe kanye nesipiliyoni sokusebenza ezinhlanganweni ezicubungula amanzi. Ngenxa yokusebenza ngempumelelo kochwepheshe bethu, sikwazile ukuzimela phambi kwabaqhudelana nathi. Ngokwengeziwe Singumhlinzeki weGolide PLUS oqinisekiswe yi-SGS. Izihlungi zethu zamanzi kanye ne-cartridges konke kuthole i-ROHS, REACH nezinye izitifiketi.
Ukuhlanzwa Kwamanzi eXuzhou Xinpaez
Inkampani ye-Equippment Limited